Tsiahy an’i Parfait Lalanirina: hanolotra seho lehibe ny tarika VHF | NewsMada
Nanakoako ireo hira fiderana noforoniny… Parfait Lalanirina, mpanakanto feno. Hanatanteraka seho ho fahatsiarovana azy ny VHF izay mandia ny faha-10 taony rahateo. Hanam-bahiny ry zareo amin’izany.
Vavaka hira fiderana na VHF, tarika manandratra ny hira fiderana an’Andriamanitra, tsy zovina intsony amin’ny maro. 10 taona lasa izay ny nanorenan’i Parfait Lalanirina azy. Raha tsiahivina, nodimandry ny volana mey teo ity filohan’ny tarika ity, saingy tsy nampihemotra ireo zanany izany fa vao mainka nampirisika azy ireo hanohy ny lalan-tsara nizoran-drainy.
Ho fahatsiarovana azy àry, hanolotra fampisehoana lehibe ny VHF, ny asabotsy 31 aogositra izao, etsy amin’ny CC Esca Antanimena. Fotoan-dehibe ihany koa izany nahatraran’ny tarika ny faha-10 taona ijoroany izany ka anisan’ny hoenti-manamarika izany ity seho ity, araka ny fanazavana hatrany. Tsy ho irery ny VHF amin’io fotoana io fa hanam-bahiny : ny Zopanage, tarika nampikambana an’i Parfait Lalanirina sy ny VHF teo aloha.
Raha tsiahivina tokoa mantsy, tamin’ny 2006 no nanorina ny tarika i Parfait Lalanirina ary norafetin’ny mpanakanto samy manana ny maha izy azy (i Bodo, i Luk, i Mahery, i Vi, i Fafa, i Francia, i Nini, i Solofo, i Naly, i Sefo). Anisan’ny hira nahafantarana ny tarika ny « Ny hiran’ny lanitra », ny « Sakaiza tsara », ny « Valim-bavaka », sns.
Nohavaozina ny firafitry ny tarika, ny taona 2013, ka nisy mihitsy ny « casting » na ny sivana, narahina fampitana fanilo amin’ny mpikambana vaovao voafantina, ahitana an’i Tsoa, i Santatra, i Tantely, i Nantenaina, i Rova, i Rolland, Iarilanto, i Jino, i Fameno ary i Fanilo. Ireto mpikambana ireto indray izany izao no mandrafitra ny tarika ary ny zanaky ny filoha mpanorina : Andrianina Toky sy Lalanirina Liantsoa no tompon’andraikitra.
Ankoatra ity seho goavana ity, eo am-pamokarana ny rakikira fahefatra ihany koa ny tarika, amin’izao fotoana izao. « Mankasitraka », « Izy mivady », « Avelao ny zaza », hira efa fantatry ny maro ary anisan’ireo ho heno ao anatin’ity vokatra vaovao ity.